उद्योग क्षेत्रको विकासमा ध्यान पुर्‍याऊ | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार उद्योग क्षेत्रको विकासमा ध्यान पुर्‍याऊ
उद्योग क्षेत्रको विकासमा ध्यान पुर्‍याऊ
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा झैं कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान चालू आर्थिक वर्षमा पनि ओरालो लाग्ने समाचार प्रकाशमा आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा नै यस्तो देखाएपछि जनताले नपत्याउने कुरै भएन । त्यसो हो भने उद्योग क्षेत्रका विकासका लागि धेरै नै काम भएको भन्ने जुन समाचार आएका थिए त्यसलाई भने नपत्याउँदा नै उचित हुन्छ ।
मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि भनेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न सभा, सम्मेलनको आयोजना हुँदै आएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । त्यसअनुरूपमा उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका पनि छन् । तर, आर्थिक रूपमा भने सुधार भएको देखिएन । यस्ता सम्मेलनको आयोजनामा उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीमा मात्र केन्द्रित गरिँदै आएकाले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । लगानी गर्न इच्छुक व्यवसायीलाई औद्योगिक विकासको क्षमता बढाउने विषयमा पनि जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा उद्योग खोल्ने र केही मजदूरलाई काममा राखेर लगानी डुबाउने मात्र हो भने त्यस्ता उद्योग खुल्नुको के अर्थ रहन्छ र ?
उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी र कामदार भएर मात्र हुँदैन, आवश्यक वातावरण पनि चाहिन्छ । उपयुक्त वातावरण बनाउने काम उद्योगी व्यवसायीका साथै सरकारको पनि हो । तर, त्यो वातावरण अहिले बनाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिले नै हुने सुधार होइन । मुलुक सधैंजसो जनताको आधिकारका लागि आन्दोलनमा अग्रसर छ । कहिले कुन राजनीतिक दलको त कहिले कुन दलको मागका लागि जनता सडकमा दौडिँदैमा ठिक्क छन् । यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? उद्योग स्थापना भए पनि मजदूरको अभावमा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न नसकिएका धेरै उदाहरण छन् ।
विगतमा सरकारी उद्योग बन्द हुनुमा सरकार मात्र दोषी छैन । ती उद्योगमा कार्यरत मजदूर र तिनका नाइकेको पनि दोष छ । अहिले फेरि केही सरकारी उद्योग खोल्ने प्रयास भइरहेको छ । मजदूरहरूले आफ्नो हकअधिकार पाउनुपर्छ । तर, मजदूरका नाइकेको फाइदाका लागि अधिकारका नाममा हुने सङ्घर्ष फेरि पनि हुन थाल्यो भने त्यस्ता उद्योग फेरि पनि बन्द हुन्छन् । यसले देशलाई आर्थिक रूपमा घाटा लगाउँछ नै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । औद्योगिक विकासका आधारमा नै मुलुक विकसित हुन्छ । लगानीकर्ताको रुचिले मात्र औद्योगिक विकास हुने होइन, लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन तथा नियम अझै बनेका छैनन् । बनेका नीति नियम पनि व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । राजनीति स्थिरता कायम भई आवश्यक नीति नियम बनाउन र उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारमा सम्मिलित दल मात्र होइन, प्रतिपक्षमा रहेका दलले पनि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।